Aguba waya nwere ogwu bụ ụdị nke oge a na nche fencing ihe chepụtara na aguba-egbusi agụba ígwè na elu-tensile waya. Aguba waya nwere ogwu nwere ike arụnyere iji nweta ihe n'ihi nke na-emenye ụjọ na ịkwụsị na ike ike perimeta intruders, na piecing na ịcha aguba pupụtara n'elu na n'elu mgbidi, na-pụrụ iche na aghụghọ na-eme ka rịa na-emetụ nnọọ ike. The waya warara na-kpaliri iji gbochie corrosion. Ugbu a, Aguba waya nwere ogwu kemgbe widel ...
Min.Order ibu: 100 metric ton / metric ton
Tụkwasịnụ Ikike: 30 metric ton / metric ton kwa Day
Aguba waya nwere ogwu bụ ụdị nke oge a na nche fencing ihe chepụtara na aguba-egbusi agụba ígwè na elu-tensile waya. Aguba waya nwere ogwu nwere ike arụnyere iji nweta ihe n'ihi nke na-emenye ụjọ na ịkwụsị na ike ike perimeta intruders, na piecing na ịcha aguba pupụtara n'elu na n'elu mgbidi, na-pụrụ iche na aghụghọ na-eme ka rịa na-emetụ nnọọ ike. The waya warara na-kpaliri iji gbochie corrosion.
Ugbu a, Aguba waya nwere ogwu e n'ọtụtụ ebe na site ọtụtụ mba agha ubi, n'ụlọ mkpọrọ, njide ụlọ, ọchịchị ụlọ na ndị ọzọ na mba nche ụlọ ọrụ. Nso nso afọ, barbed teepu ka o doro anya na-aghọ ndị kasị ewu ewu na elu-klas fencing waya maka bụghị nanị agha na mba nche ngwa, ma n'ihi na obi na otu nsu, na ndị ọzọ na onwe ụlọ.
Aguba Agụba nkọwapụta
Barbed Mezie Concertina (CBT); barbed Mezie Ghara Inwe (BTO)
Standard ihe na ma ama edemede ma ọ bụ igwe anaghị agba ígwè.
Standard ekwekọghị ngwaahịa na-egosi na tebụl n'elu, pụrụ iche nkọwa dị na arịrịọ.
Barbed Mezie Waya nkọwapụta
Loop n'èzí dayameta
Mba nke Loops
Standard Ogologo kwa eriri igwe
8-9m (3 mkpachị)
9-10M (3 mkpachị)
10-11M (3 mkpachị)
8-10M (5 mkpachị)
10-12M (5 mkpachị)
11-13M (5 mkpachị)
12-14M (5 mkpachị)
13-15M (5 mkpachị)
14-16M (5 mkpachị)
Notes: Standard ngwaahịa ekwekọghị na-egosi na tebụl n'elu, pụrụ iche nkọwa dị na arịrịọ. Standard ihe na ma ama edemede ma ọ bụ igwe anaghị agba ígwè.
Tụkwasị na nke a na ngwaahịa, anyị na-Nlụpụta igwe nke na-emepụta ha.
Previous: Staninless Steel Aguba waya nwere ogwu
Osote: waya nwere ogwu
Rebar welded ntupu
Kpara akpa waya nwere ogwu
Brass waya ntupu